Ahoana no ahafantaranao fa mandeha haingana ny finday haingana | Androidsis
Nerea Pereira | | bateria, Tutorials
Misaotra ny fiampangana haingana, ny traikefa tamin'ny finday dia nihatsara be. Isika dia miaina ao anatin'ny tontolo iray izay isan'ny isa isaky ny segondra, ary ny famerenam-bola 15 na 20 minitra dia mety ilaina mba hahazoana antoka fa maharitra ny fizakantenan'ny terminal mandritra ny andro. Noho io antony io dia ilaina ny mahafantatra raha mandeha ny sarany haingana ary inona no karazana azy, satria misy maro eny an-tsena.
Ny marika famahanana haingam-pandeha haingana izay hitanao eny an-tsena dia manana ny haitao misy azy ireo, dia ireto ny OPPO, Samsung, Xiaomi, Realme ary Motorola. Hatramin'ny fotoana sasany amin'ny fiainanao dia mety manontany tena ianao raha mandeha tsara ny vidiny haingana, dia tokony ho fantatrao fa zavatra azonao zahana mora foana isaky ny tianao izany.
1 Ahoana no hahalalana raha miasa haingana ny famandrihana
1.2 Jereo ny sary mihetsika fampidinana
1.3 Esory ity fisalasalana ity amin'ny fisalasalana
1.4 Android no hilaza aminao ny zava-drehetra
1.5 Ny karazana famahanana haingana
1.6 Zahao ny charger
1.7 Ampidiro ny fikirana
1.8 Tsidiho ny tranokalan'ny mpanamboatra
Ahoana no hahalalana raha miasa haingana ny famandrihana
Ity no fanondroana voalohany hanampy anao hahafantatra raha mandeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra. Ny mpanamboatra dia manome angon-drakitra momba ny fahafaha-mitaky vola, ohatra iray dia mety raha toa ka tsy maintsy manefa 50% ny bateria ao anatin'ny 30 minitra ny terminal anao, saingy maharitra ela kokoa, mamela sisiny kely eo anelanelany, ny famerana haingana dia tsy mahavita ny asany.
Raha izany no olana dia tsy maintsy zahao raha mameno ny findainao amin'ny charger voalohany ianao. Ny zava-misy dia tsy ampidirin'ny mpanamboatra ny charger haingana amin'ny fonosany fivarotana. Noho io antony io dia tsy maintsy mieritreritra ianao raha te hividy an'ity karazana charger ity raha te hanararaotra an'ity teknolojia ity.
Jereo ny sary mihetsika fampidinana
Betsaka mpanamboatra izay misy sarimiaina samihafa amin'ny famatrarana haingana. Amin'ity fomba ity dia azo atao ny mahafantatra raha mandeha ny hafainganam-pandeha haingana na mahazatra, ny marika OPPO, Realme, Xiaomi, ankoatry ny hafa. Noho izany, rehefa mampiasa famandrihana haingana ianao dia afaka mahita izany amin'ny kisary fiampangana ny terminal.
Esory ity fisalasalana ity amin'ny fisalasalana
Misy ny rindranasa izay noforonina manokana mba hampisehoana amin'ny antsipiriany izay mitranga amin'ny telefaona finday rehefa sarany. Misaotra an'io, hitanao amin'ny fotoana tena izy ny hafainganan'ny famoahana azy, ny fotoana sisa mandra-pahatongany amin'ny 100% sy ny fampahalalana momba ny entana teo aloha. Amin'ireo rehetra misy, ny malaza indrindra dia ny Accubattery, izay mampiseho bara miloko maitso rehefa miasa haingana ny famandrihana. Miaraka aminy no hahitanao ny amperage sy ny fahaizan'ny batterie rehefa mamaly azy.
Accu Battery - Battery
Android no hilaza aminao ny zava-drehetra
Eny tokoa, ity rafitra miasa ity dia afaka milaza aminao raha miasa araka ny tokony izy na tsia ny sarany haingana. Raha mbola manana ny terminal mifamatotra amin'ny ankehitriny ianao, hahita hafatra eo amin'ny efijery hidinao ianao. Izy io dia afaka miteny hoe 'Fampandefasana' na 'Fiampangana haingana', ny tranga voalohany dia midika fa ny telefaona dia miakatra eo anelanelan'ny 5W sy 7.5W, amin'ny tranga faharoa dia mihoatra ny 7.5W ny fiampangana.
Ny karazana famahanana haingana
Araka ny efa nohazavaina tetsy ambony dia misy karazana hafainganam-pandeha haingana. Ny heriny lehibe kokoa na kely kokoa dia mifandraika mivantana amin'ny elanelana misy ny terminal anao. Noho izany, ny fanohanana famandrihana 10W na 10 watt dia heverina fa mamaly haingana, satria ny Quick Charge 1.0 dia efa nanolotra fanohanana an'ity hery ity. Na eo aza izany dia tsy hitovy izy raha tafakatra amin'ny herin'ny 10W ny telefaonanao, izany hoe iray amin'ny 18W, na ilay mandroso indrindra, 65W.
Zahao ny charger
Ny charger tany am-boalohany no famantarana tsara indrindra ho anao, ity dia mampiseho ny volts sy amps tohanan'ny azy. Ohatra iray dia mety: raha aseho ny 5V / 2A, midika izany fa ny heriny mahazaka dia 10W. Raha toa ka 18W ny sarany haingana, dia afaka jerena ao amin'ny charger ny 9V / 2A. Amin'ny tranga rehetra dia tsy mila ampitomboinao fotsiny ny amps amin'ny volts, mba hahazoanao ny watts amin'ny entana.
Ampidiro ny fikirana
Tsy azo atao izany amin'ny terminal rehetra, fa amin'ny ankamaroan'izy ireo dia ahitanao ny fampahalalana ilaina momba ny karazana enta-mavesatra ao amin'ny menio Settings, miditra amin'ny faritra Battery. Araka izany, hitanao ny atao hoe ny voltatera, ny karazana fiampangana ary ny haavon'ny batterie.
Tsidiho ny tranokalan'ny mpanamboatra
Raha miditra amin'ny sehatra Internet natokana ho an'ny findainao ianao dia afaka mahita antsipiriany momba ny famahana haingana sy ny baterinao. Toy ny fitsipika ankapobeny, ny mpanamboatra dia manokana fizarana iray hanisana ny fahombiazany betsaka indrindra, ny hafainganam-pandehan'ny entana ary ny watts ho an'ny enta-mavesatra amin'ny antsipiriany maro hafa hahafahantsika mahafantatra izay karazana enta-mavesatra iray ananany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Hamafiso fa mandeha tsara ny famandrihana haingana amin'ny findainao
Kingdom of Heroes: Ady taktika izao misy amin'ny ady mifandimby sy maherifo marobe hanangona